yangon Jobs, recruiting south africa | za.jobs68.com
Search found 331 jobs
yangon (331) Apply yangon filter
instant jobs (331) Apply instant jobs filter
အမြန်ဆုံးအင်တာဗျူးမည်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ ( Export & Import Company) အတွက်... (၁) Senior Accountant...
အမြန်ဆုံးအင်တာဗျူးမည်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ ( Export & Import Company) အတွက်... (၁) Senior Accountant - မ (၁) ဦး - စာရင်းကိုင်နှင့်ပတ်သက်သောဘွဲတခုခုရရှိထားသူ - (သို့မပာုတ်) LCCI Level3Dipaloma ၇၇ှိထားသူ - အသက် ( ၂၇ -၃၅) ၀န်းကျင် - MYOB Software အသုံးပြုနိူင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေအကြုံ ( ၅ နှစ်) - လစာ ( ၅၀၀၀၀၀) ၀န်းကျင် - အလုပ်ချိန် ( ၉ နာရီ - ၅ နာရီ ခွဲ) - ပိတ်ရက် ( တနင်္ဂနွေ ၊ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်) - ဖယ်ရီရှိမည်။ ********************************************************************* အောင်မြင်ပြည့်စုံ ( Employment Service ) မှတဆင့်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။ ********************************************************************** အထက်ပါရာထူး နေရာအတွက် အမြန်လိုအပ်နေပါသောကြောင့် မိမိအရည်အချင်း နှင့် ကိုက်ညီပီး စိတ်ပါဝင်စားသူများး အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်စုံစမ်းလျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။ *********************************************************************** အမှတ် (၉) ၊ (၄)လွှာ ၊ အနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်းမ ၊ ဗပာန်းမြိုနယ်။ (တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်အနီး) Contact - 09732 38561 ,09789 822339, 01 549705 Email -ampsjobservice@gmail.com
JOB VACANCY We Are Excited To Introduce The New Brand...
JOB VACANCY We are excited to introduce the new brand hotel in Yangon-Myanmar. Now Opening at No.76, Upper Pansodan Street, Mingalar Taungnyut Township, Yangon Myanmar. We are looking foradynamic, strong communication skills, guest services oriented, able to work inateam of talented professionals,apassion for people ...
VACANCY ANNOUNCEMENTwww.rgkzna.com 1. Job Title : SUB ASSISTANT ENGINEER (SAE)...
VACANCY ANNOUNCEMENTwww.rgkzna.com 1. Job title : SUB ASSISTANT ENGINEER (SAE)4POSTS 2. Report to : Deputy Chief Engineer 3. Unit : Air Conditioning and Refrigeration 4. Duty Station :2posts for Mandalay (or)2posts for Naypyitaw 5. Educational Qualification : B Tech (Mechanical) or B.E (Mechanical) 6. Working Experience : At least (2) years experience in Air-con Design Engineering. 7. Other ...
ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးပါရစေရှင် ညောင်ရွှေ နှင့် ငပလီရှိစားသောက်ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါဝန်ထမ်းများခန့်အပ်လိုပါသည်။ ------------------------------------------ စားသောက်ဆိုင် ငပလီ 1. F&B Supervisor ...
ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးပါရစေရှင် ညောင်ရွှေ နှင့် ငပလီရှိစားသောက်ဆိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါဝန်ထမ်းများခန့်အပ်လိုပါသည်။ ------------------------------------------ စားသောက်ဆိုင် ငပလီ 1. F&B supervisor Male (2) Post 2. Waiter Male(3) Post 3. Cook Male(1) Post ------------------------------------------ ညောင်ရွှေမြို့ တောင်ခြေရှိ ဟိုတယ်တစ်ခုအတွက် 4. F& B Manager Male(1) Post -------------------------------------------------------- မှတ်ချက်။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ ရာထူးအားလုံးအတွက် ဟိုတယ်တစ်ခု ခု သို့မဟုတ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုခု တွင် သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအလိုက်လုပ်ကိုင်ဘူးသူ/လုပ်ကိုင်နေသူများသာ လျှောက်ထားနိင်ပါသည်။ ------------------------------------- Contact- 09-975545492 Email; ulayzawmin4@gmail.com သို့ Cv ပေးပို့လျှောက်ထား နိင်ပါသည်။
Vancancy Urgent Palm Spring Resort Hotel Housekeeping Male/Female (2) Posts CV များကို No.7/F,...
Vancancy Urgent Palm Spring Resort Hotel Housekeeping Male/Female (2) Posts CV များကို No.7/F, Mingalar St, Insein သို့ လာရောက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။palmspringhr@gmail.com သို့လည်း mail မှ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
Talent Hub Agency မှလက်ရှိခေါ်ယူလျက်ရှိသော Positions များကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် 1) Administrative Assistant Male/Female -...
Talent Hub Agency မှလက်ရှိခေါ်ယူလျက်ရှိသော Positions များကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် 1) Administrative Assistant Male/Female - 1 post - ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက်၂၀နှစ် မှ ၂၈နှစ်ကြား - LCCI level II အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စကား (သို့) တရုတ်စကားပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာ Microsoft Word, Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Admin လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများလျှောက်ထားနိုင်သည်။ -အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းအထက်ပါအရည်အချင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါကလျှောက်ထားနိုင်သည်။ - လစာ - ၃ သိန်း နှင့် အထက် (မျှော်မှန်းလစာဖော်ပြ၍လည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။) - ကြည့်မြင့်တိုင်မြို့နယ်။ ====================================== 2) Business Development Executive/ Assistant Manager Male - 2posts - ဘွဲ့တခုခုရရှိထားသူ။ - Business Development ပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိ သူဖြစ်ရမည်။ - Marketing Executive ရာထူးဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖူးသူများလည်း စိတ်ဝင်စားပါကလျှောက်ထားနိုင်သည်။ - Service လုပ်ငန်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူများနှင့်ပို၍သင့်တော်သည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အပြင်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။ - English Communication Level ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ ...
Store Sales Management Staff (Male) @ Ahlone & Thilawa Japanese Company...
Store Sales Management Staff (Male) @ Ahlone & Thilawa Japanese Company ကြီးမှ ** Store Sales Management Staff ** (ကျား )တစ်ဦးအမြန်ခန့်ထားရန် ရှိသည် (Code no : M853) Requirement -UFL (English )ဖြင့် ကျောင်းပြီးထားသူများ နှင့် National -Management College မှ ဘွဲ့ ရရှိပီးသူ၊ Yangon Institute Of Economic မှ ဘွဲ့ရထားသူ Marketing ပိုင်းအား စိတ်ဝင်စားသူ များလျှေက်ထားနိုင်ပါသည် - Driver License ရှိရမည် -English (Intermediate) ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်။ Salary ; 300,000~1,000,000 MMK Location : အလုံ၊ သီလဝါ *** အတွေ့ အကြုံ မရှိသေးသူများလည်း လျှောက်ထားနိူင်ပါသည်။** စိတ်ဝင်စားသူများအနေဖြင့် thetmyat@jobbank.com.mm သို့ CV များပေးပို့လျှောက်ထားနိူင်ပြီး 09794300406 သို့လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Admin တင်ခွင့်ပြုပါ.. ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည် Operation Executive (M)/F (2 ) Post Job Description -...
Admin တင်ခွင့်ပြုပါ.. ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည် Operation Executive (M)/F (2 ) Post Job Description - Support Relationship Manager ( Account Handler ) for the smooth operation - Lead the drivers for the operation and on time issue - Overview for the Advance ( Toll fee & Fuel Charges ) - Make calculation for the driver's salary and overtime - Made ...
ရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် Dream Catcher Hostel တွင် Receptionist5Post Male/Female Housekeeping 5post Male/Female FO...
ရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် Dream Catcher Hostel တွင် Receptionist5post Male/Female Housekeeping 5post Male/Female FO supervisor2post Male/Female Housekeeping Supervisor 2posts Male/Female အများအလိုရှိသည် စိတ်ဝင်စားသူများ CV ကို nlwlasho@gmail.com သို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်
Vancancy Urgent TRYP By Wyndham (Dragon Mountain Hotel ) 1.Sales &...
Vancancy Urgent TRYP By Wyndham (Dragon Mountain Hotel ) 1.Sales & Marketing Manager2post CV များကိုကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း စာတိုက်မှတ်တိုင် အနီးရှိ TRYP Hotel ၏ လုံခြုံရေးဌာနတွင် ၂၄ နာရီ လာရောက် လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။hr@trypyangonhotel.com သို့လည်း mail ပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
GARMENT MERCHANDISER NEEDED (MD), Myanmar Citizen Location: Yangon (7 1/2Mile) Starting Date:...
GARMENT MERCHANDISER NEEDED (MD), myanmar citizen Location: Yangon (7 1/2Mile) Starting Date: Jan 2018 I'm looking foragarment merchandiser with min.2years experience in the garment sector with following skills Skills: - good written and oral communication skills (burmese+english) - basic computer skills (word, excel, powerpoint) - the ability to ...
နိုဝင်ဘာလ ( November– Part 14 ) အတွက် Job Position –...
နိုဝင်ဘာလ ( November– Part 14 ) အတွက် Job Position – ( ၄၀ ) မျိုး - G A S Recruitment Agency -လျှောက်ထားလိုသည့် ရာထူးများကို CV ( သို့ ) အီးမေးလ်တွင် တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးပါရန် ။ ၁) Sales & Marketing Manager – Male / Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ရန်ကင်းမြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃) နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • ဆေးဝါးပိုင်း လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ် မူတည်ပြီး လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။ ၂) Vehicle Officer - မော်တော်ယာဉ်ထိန်းသိမ်း အရာရှိ – Male - (5) Posts - ကျား ( ၅ ) ဦး / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်မြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရ ( သို့မဟုတ် ) ဆယ်တန်းအောင်ရမည်။ • Maintaince အပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်ရမည်။ • ကားအစီးရေ ၂၀ - ၃၀ ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နိုင်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။ ၃) Operation Manager – Male/Female - (5) Posts / လစာ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • ကားပစ္စည်းများရောင်းချဖူးသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ • Management ပိုင်းနှင့် Experience ရှိရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ ၄) Sales Coordinator – Female - (5) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက်) / ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • အရောင်းပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ • Construction Site များကိုသွားရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာရမည်။ • Painting Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ ၅) QC ...
Immediate Hiring 3D Designer; For Event & Promotion Company , In...
Immediate hiring 3D Designer; for Event & Promotion Company , in Yangon, Experience -1/2 year in Event Industry Interested Candidate please sends their CV to – zon@brooklynintl.com , jobs@brooklynintl.com
Hello! Our School, Oxford Peaches, Is Seeking For Two Part-time English...
Hello! Our school, Oxford Peaches, is seeking for two part-time English Kindergarten teachers. If interested, please send your CV to us to stella.purdue@gmail.com, stating all your previous experiences in detailed. Work time and salaries are negotiable. If you have further questions about the job description, you call ...
Job Post Vacancy Available : 3***+ Hotel In Yangon F&B Manager: 1...
Job Post Vacancy Available : 3***+ Hotel in Yangon F&B Manager: 1 Post Sales Manager (4-5 years hotel experience): 1 Post Reservation Staff: 1 Post M&E:2Post Receptionist:2Post (M) For all positions, candidates need related background experiences in Hotel industry. Good English communications skills, both written and oral. Candidates who ...
#Sales Representative (Female) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ အသက် (၂၇)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမလိုပါ။ အလုပ်ချိန်နံနက်(၆)နာရီမှည(၈)နာရီထိ။ တစ်ရက်ဆင်းတစ်ရက်နားဖြစ်ပါသည်။ လစာ (၁၅၀,၀၀၀)ကျပ် + Sales % +...
#Sales Representative (Female) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ အသက် (၂၇)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမလိုပါ။ အလုပ်ချိန်နံနက်(၆)နာရီမှည(၈)နာရီထိ။ တစ်ရက်ဆင်းတစ်ရက်နားဖြစ်ပါသည်။ လစာ (၁၅၀,၀၀၀)ကျပ် + Sales % + Uniform + Ferry #Sales Manager (Male / Female) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ အသက် (၃၅)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ English4Skills ရရမည်။ Liquor အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ Sales & Manager Experience (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ချိန်နံနက်(၉)နာရီမှညနေ(၅)နာရီထိ။ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်ပါသည်။ လစာ (၈၀၀,၀၀၀ - ၁,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ် + Sales % + Uniform + Ferry လင်းရောင်ခြည်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း Viber: 09974000848 Email: hr.lycrs1@gmail.com
Merchandising Manager (Manager Of BTL Section Of Marketing Dept) For One Of...
Merchandising Manager (Manager of BTL section of Marketing Dept) For One of the FMCG Companies Salary Range - 900,000ks – 1,000,000ks Working Days – Monday to Saturday Working Hours – 8am to 4:40pm Job Description - Planning & Management of BTL (Merchandising, Sampling, Consumer promotion) activity based on total communication strategy - POSM ...
I'm Posting This For A Friend Who Doesn't Use Facebook:...
I'm posting this forafriend who doesn't use Facebook: **Experienced native English teacher seeking part-time work in Yangon. I'll be available from December 1st and able to accept 3-6 month contracts. Please feel free to contact him at +9509953033001 or zizkov3@yahoo.com. Thank you.
Amazing Technologies Software Solution ၏ Business Development Department Yangon နှင့်...
Amazing Technologies Software Solution ၏ Business Development Department Yangon နှင့် Mandalay တွင် ခန့်ထားရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ IT Sales Executive ( ကျား / မ (၄) ဦး) ============================ # ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစား ပေးမည်။ Microsoft i-Office , E-mail , Internet ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ # ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသော IT Products များအား စိတ်ဝင်စားပြီး ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်ရမည်။ # နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သောသူများဦးစားပေးမည်။ မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းအပေါ် အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး ရိုးသားတက်ကြွစွာဖြင့်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ IT Sales Assistant အလိုရှိသည် ( ကျား / မ (၄) ဦး) ==================================== # ပညာအရည်အချင်းအခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။ ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ # ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။ သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရောင်း ပိုင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ဖူးသူများကို ဦးစားပေးမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ Position အားလုံးအတွက်လစာ + Bonus ရှိပါသည်။ ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော ၀န်ထမ်းများသည် Amazing Technologies (Yangon ) တွင် Training ရယူပြီး မန္တလေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Project Area သည် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူများ နှင့် Project Area အတွင်းနေထိုင်သူများအား ဦးစားပေး ခန့်အပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလိုသူများသည် ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထား၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူများဖြင့် မနက် (၉း၀၀) မှ (၆း၀၀) ထိ ရုံးချိန် အတွင်းလာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်ဖြင့်လျှောက်ထားလိုပါက amztech.myanmar@gmail.com , info@amztechnology.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ကြပါသည်။ လိပ်စာ ( ရန်ကုန်) - အမှတ် ၁၃၆၊ မြို့သစ် ခ-၁၁ လမ်း ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ( မန္တလေး ) - တတ-၄၉/၂၄ ၊ အောင်ဇေယျလမ်း နှင့် ၅၇ x ၅၈ လမ်းကြား ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့။ ဖုန်းနံပါတ် - 09969786736 , 09966911435
********** Urgent ********** Logistic Staff @ Thilawa (Code : M842) လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ...
********** Urgent ********** Logistic Staff @ Thilawa (Code : M842) လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များမှာ # - Air transport (Export) (သို့) Marine transport (Export) လိုအပ်ချက်များမှာ # - Logistic field တွင် အတွေ့ကြုံရှိသူမည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - အင်္ဂလိပ်စကား(Intermediate Level) ပြောနိုင်ရပါမည်။ - အသက် ၂၂နှစ်မှ ၃၂အတွင်းရှိသူ အလုပ်ချိန် - Mon ~ Fri (8:30 AM ~ 5:00 PM) Sat (Half-day) လစာ - (300,000 ~ 500,000) MMK *Benefit : Ferry from North Dagon to Thilawa* အလုပ်နေရာ - သီလ၀ါ။ မိမိနှင့်အဆင်ပြေပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် pyae@jobbank.com.mm သို့ CV ပေးပို့လျှောက်ထားခြင်း (သို့) 09-421131675 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။